musha > Travel Europe > Restaurant Week In The Netherlands
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 02/06/2020)
Kana tanga kuronga rwendo Amsterdam asi vachiri yokuzvifungidzira zvakanaka nguva kuenda, zvingangokukunda vanoda funga kushanya panguva Restaurant Week 2019 muNetherlands.
Restaurant Week ari chiitiko culinary zvinoitika pagore rose iri 35 Maguta makuru akaita Amsterdam, New York, uye Hong Kong. Wokutanga Restaurant Week kwakaitika mu New York; akasikwa Tim Zagat, muvambi Zagat Survey, uye Joe puu, anoremekedzwa restaurateur.
The vhiki kwakanga kubudirira kuti pakanyenga akayambukira mamwe maguta munyika yose. The mazuva Restaurant Week zvinosiyana muguta neguta; zvisinei, pfungwa iri yemanyorero chete mhiri zvose nzvimbo. Kutora eateries kusimudzira vhiki kupa kwemasikati uye chisvusvuro Specials pa anoyevedza mitengo.
Kana iwe rudo chikafu uye dzenyu bhajeti ishoma, Restaurant Week anokupa mukana azodya kumusoro maresitorendi muAmsterdam panguva discounted mutengo. Anofarirwa mukana kudya panguva yomufaro Le Garage, ari Brasserie La Camelia pa Okura Hotel, kana Brasserie panguva Amstel Hotel kuti asingasviki!
Zvakanakisisa ndechokuti National Restaurant Week kunoitika muAmsterdam kaviri pagore, muchirimo uye zvakare muna kwematsutso. Kaviri pagore, maresitorendi zvose pamusoro The Netherlands vane vhiki-refu zviitiko apo unogona kunakidzwa zvizere kosi zvokudya chikamu chii yemanyorero vangadai mari. Nakidzwa 3-kosi zvevanhu chete € 28,50!
anenge 135 maresitorendi zvose pamusoro Amsterdam kubatanidzwa inoita zvisarudzo zvakawanda. The chiitiko biannual ndehwokuti nyore chiitiko. Nokunwira pana Amsterdam wakanakisisa dzokudyira establishments kuburikidza zvakabudiswa menu dzavo nokuda wakaiswa mutengo. Pane nguva nani kwauri kuti ravira resitorendi siginicha ndiro kuti zvimwe kubhadhara mutengo chizere panguva mimwe nguva yegore.
Asi usati wawana yakanyanya kufara, cherechedza kuti haugoni chete kufamba munzvimbo mumaresitorendi izvi uye vanotarisira pasi. Reservations muri kunofanira, saka unofanira bhuku mangwanani sezvo unogona sezvo nzvimbo idzi zvinoodza kuzadza nekukurumidza.
Antwerp kuna Amsterdam Train
Sei Svika Restaurant Week mu The Netherlands
Kunyange zvazvo pane nzira dzakawanda yokufamba kuti iwe kuna Amsterdam Restaurant Week chiitiko, chitima kufamba ndeimwe yenzvimbo zvinofadza uye inonakidza nzira rwendo. Inoita yose ruzivo zvakawanda risingakanganwiki sezvo yenyu vofamba Europe, kutora ari zvisakamboonekwa uye vasvika panguva yenyu gastronomic rwendo mumagadzirirwo nenyaradzo.
Chimwe chinhu chakanaka kana iwe rwendo Europe ndechokuti haufaniri kuita kutsinhanisa mari yako, ndizvo zvose chete.
Paris kuna Amsterdam nechitima iri anenge 3 maawa nehafu apo Berlin kuna Amsterdam ari 6-awa chitima rwendo. Book mangwanani uye tichengetedze tikiti mitengo. Check out misi kuti Restaurant Week 2019 mu The Netherlands saka unogona kuchengetera yenyu chitima zvigaro pachine uye vanonakidzwa nemari huru. Get yakanakisisa prices pamusoro nechitima okufamba Save A Train
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/restaurant-week-netherlands/ - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#resitorendi #restaurantweek travelholland travelnetherlands traveltips